PressReader - Ilanga: 2017-11-02 - Kuduma ikhanda kuKomphela
Kuduma ikhanda kuKomphela
UMolangoane usedidise umqeqeshi ngebhola
Ilanga - 2017-11-02 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
KUDUMA ikhanda kuSteve “Mphathi” Komphela ongumqeqeshi weKaizer Chiefs ngomdlali wakhe owenza izimanga endaweni afakwe kuyona ukuchibiyela ngenxa yokulinyalelwa.
IChiefs ishayane yaze yabukana nePolokwane City kuba ngu-0-0 kowe-Absa Premiership ngoLwesibili ebusuku ePeter Mokaba Stadium, ePolokwane.
UJoseph “Tight” Molangoane osedlala ophondweni lwesokudla emuva kwiChiefs, ube nomdlalo omuhle ekhombisa ingcwenga yebhola. Udlala kule ndawo nje, kuyachitshiyelwa ngaye njengoba kulimele uRamahlwe “Rama” Mphahlele okufana nokuthi ngeyakhe le ndawo noKgotso Moleko naye olimele olisekela likaMphahlele kule ndawo.
UMolangoane usayiniswe yiChiefs ukuzodlala ophondweni lwesokudla phambili. Ufakwa emuva nje, ubengasadlali nhlobo kwiChiefs isikimu esizwa ngendaba. Kuze kwaba nezinsolo zokuthi uxabene noKomphela.
UKomphela uthi kuduma ikhanda ngoba akazi ukuthi uzomisa kanjani uma sekululeme uMphahlele noMoleko.
“Ngeke balimale unomphelo, basazobuya, ukuthi ngizokwenzenjani ngoMolangoane angazi, kuduma ikhanda. Kodwa-ke into enhle iyanconywa, ngikholwa wukuthi uyibambe kahle le ndawo, udlala ibhola eliseqophelweni eliphezulu. Uyakhombisa ukuthi kakusho lutho ukuthi inja ingakanani okumqoka yimpi engaphakathi kuleyo yinja,” kusho uKomphela. Uthi baziyekele ukunqoba lo mdlalo.
“Kulo mdlalo sishaywe ngamathuba esiwayekile, besingawunqoba ngembudlu yamagoli. Kodwa-ke yinto yakhona ngijabule ngephuzu esilitholile,” kusho uKomphela.
UBernard Molekwa ocija iPolokwane, uthi bazisindele ngenhlanhla kwiChiefs. Uthi bekufanele ibabhabhadise ngenqwaba yamagoli.
“Sakhe amathuba amabili umdlalo wonke avinjwe nguKhune (Itumeleng), iChiefs yakha inqwaba obekufanele isibhabhadise ngawo yasiyeka. Kodwa-ke ngijabule ngoba kasihlulwanga, izinto zisasihambela kahle emuva kokuqala kabi isizini,” kusho uMolekwa.